Anodiwa AT&T U-Verse | Martech Zone
Chishanu, February 5, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndatove mutengi wako. Ndine foni yekumba uye DSL kuburikidza newe (yaimbova SBC). Ini ndinoda sevhisi asi ndinoshuvira kukwidziridza iyo DSL pamwe nekutora mukana weiyo huru TV sevhisi yauinayo. Iwe unoona, imba yangu inongopa pasuru yekutanga uye ndinoda kusimudzira.
Kwemakore mashoma apfuura, iwe wakatumira mamwe Zvinoshamisa zvinokwezva tsamba yakananga kukumbira kuti ndiwedzere. Ndinovawana kanenge kamwe chete pamwedzi vakanyorerwa zvakanaka kuimba yangu. Mumwe mwedzi iwe wakatumira izere rine mavara bhuku iro rakatsanangura ese mapakeji eese maviri DSL neTerevhizheni. Makandibata… ndakatengeswa! Ini ndoda kukwidziridzira kuU-Verse kuti ndione maColts achikunda neSvondo mukubwinya kwavo kwese.
Izvi ndizvo zvamunondiratidza… uye hongu, ndakagadzirira!
Saka, ndinoshanyira AT & T.com uye tinya pane iyo Simudzira Zvino bhatani. Doh! Kutanga ini ndinofanira kutarisa kuti ndiwane kuwanikwa. Ndinoziva zviripo, zvakadaro, nekuti muvakidzani wangu mu # 1324 akange aine sevhisi kweanopfuura gore (akatama). Ndo panhau yechitatu… Ndiri pane nyaya yechipiri. Saka, ndinotumira kero yangu uye nhamba yefoni…
Basa Harisi Kuwanikwa.
Mubvunzo wangu wekutanga, Anodiwa AT&T, ndosaka ungatumira kushambadza kukero yangu yegore rapfuura uchikumbira kuti ndivandudze kubasa rako kana zvisiri zvechokwadi (izvo zvandinoziva kuti hazvisi zvechokwadi). Wapedza mari yakati wandei pane ino gara yakatarisana netsamba dzakananga. …
Ah zvakanaka… ndinosarudza kutora imwe nzira. Ini ndinodzvanya paChat Online ikozvino sevhisi pane rako peji. Ndiri mumutsetse nevatengi gumi nemashanu vakamirira. Ini ndinofunga unogona kudonhedza iyo ikozvino. Ini ndakabaya padhuze nepahwindo ndobva ndafunga kufona panzvimbo. Ini tinya Bata nesu… ndinotenda kuti une nhamba dzenhare dziripo.
Runhare runopindura neizwi roga uye rinondikumbira kuti ndiise nhamba yangu yefoni account. Ndino. Zvino zvinondibvunza zvandinoda kuita, ndinonyatso taura kuti "Tora U-Ndima" ndichifunga kuti "U-Ndima" ruzha rwakanaka kubata. Kwete enda… “Ndine urombo, handisi kunzwisisa chikumbiro chako.” Iye zvino ndave kunetseka zvishoma. "Simudzira kuU-Ndima"… izvo zvinoshanda.
Iyo system inondiudza kuti ini handigone kukwidziridza, ini ndinokwereta imwe mhando yekudzosera kumashure. Nekudaro, ini ndinoribhadhara parunhare nekadhi rechikwereti nekutaipa munhamba dzangu dzese. Unoda kuziva kuti sei usina kundiudza izvi pawebhu peji pandakanopinda mukati ndikakumbira sevhisi.
Chero zvakadaro, ini ndakabatana ne rep, Shannah, uye anonakidza. Tine hurukuro diki nezve maColts ari kurova Vasande vhiki rino. Anondiudza kuti murume wake anofarira maBheya. Ini ndinobvunza, "Ivo vachiri muNFL here?". Akawana kuseka kubva ipapo. Anondiudza system yake inoti haina kuwanikwa futi. Ndinomuudza kuti muvakidzani wangu aive nayo uye anobvunza kero yavo. Ndinofanira kumhanya ndichibuda mufurati, kukwira masitepisi, ndotora nhamba. Ini ndinomhanya ndichidzokera pasi ndomuudza # 1324.
Anoenderera mberi uye achifunga kuti ari kufambira mberi. Ndiri kufara kwazvo. Ipapo kufona kwakadonhedzwa.
Hapana anofona back… ndinofungidzira kuti system haina kuteedzera nhamba yangu uye ini handina nzira yekubata Shannah ikozvino kuenderera mberi nekutsvaga. Ndakaedza kufona kusvika kune anoshanda kechipiri asi ikozvino pakanga paine kumirira zvakare.
Saka… ndinoshanyira webhusaiti zvakare uye ndosarudza kunyora email. Ini ndinodzvanya Taura nesu pazasi peji uye nyora "Simudzira kuU-Ndima" mumunda uripo. Ini ndinodzvanya kuendesa uye peji rekurodha zvakare nemaviri e-mail sarudzo pazasi. Ini ndinodzvanya yekutanga e-mail sarudzo ... uye pachinzvimbo cheemail kero kana fomu, ini ndinoratidzwa neiyi link kudzokera kuU-Verse webhu saiti. Ndiyo saiti ini yandaive ndatova.
Zvinondiita kuti ndide kuziva kana iwe wakamboita yekushandisa-kuyedza neako saiti kuti uone kuti zvingave nyore kana kuomarara sei kune ako vatengi kushandisa yako epamhepo masevhisi. Ini ndinoshamisika kuti mangani mazana kana zviuru zvevamwe vatengi vanoda kubhadhara zvakanyanya uye vova vatengi vanokosha kusangano rako - asi vasingakwanise.
Ikoko unayo, AT&T. Ini ndiri (kare) anofara mutengi uyo anoda kukwidziridza account yavo. Ndabhadhara zvikwereti zvangu, ndine mari, uye wanga uchindishambadzira kwandiri kuti uzviite kwemakore mashoma. Iwe unonyatsoda kuti ini ndiwedzere, handiti? Kana ukadaro, yako webhusaiti haina kugadziridzwa, yako yepamoyo kutaura haisi kuchengeta, yako system haina kunyatso, uye yako foni system (zvinosetsa) inogona kunge yadonhedza kufona kwangu.
Ndakagadzirira kana iwe uri.
Zviripachena, izvo hazvisi nhasi.
Tags: kutenga zororohtaccess redirectmultivariate kuyedzakugadzirisa mutauro mutaurobvisa foldaVouchfor!WordPress
Feb 6, 2010 at 10:36 PM
Ndakava nechiitiko chimwe chete neu-verse. Zvinotyisa. Ndinoida SO zvakaipa. Ndakagamuchira maemail uye kunyange telemarketing mafoni nezvazvo. Sevhisi haisi kuwanikwa munzvimbo yedu. Zvese mune zvese, handisati ndamboona kambani yakaipa kwazvo pakushandira vatengi vayo.
Apr 30, 2011 pa 6: 27 PM
Izvozvo zvinonzwika sedambudziko. Wakambopedza kuwana upgrade yawanga uchitsvaga here? Ini pachangu, ndinoda kunamatira neyangu DISH Network service. Ndave ndakanyoresa kwenguva yakareba uye munguva pfupi yapfuura ndakava mushandi zvakare. DISH ichine akawanda HD chiteshi kupfuura chero ani zvake muindastiri pamwe chete nemadhiri makuru senge HD yemahara kwehupenyu. Uyezve kune zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo zvakare, semuenzaniso kuvimbika. Paunenge uchiwana yako yese varaidzo / yekutaurirana masevhisi kubva kune imwechete sosi, kana mumwe aine kubuda, ivo vese vanoita. Zvirinani kana imwe yemasevhisi angu ikasangana nehiccup ndinogona kunakidzwa nemamwe.